သငျသညျ R ကို, Python ကိုနှင့် Hadoop အကြောင်းသိထားသင့် 10 အရာ | ယင်း
သငျသညျ R ကို, Python ကိုနှင့် Hadoop Learn သင့်သ 10 အကြောင်းရင်းများ
ကျွန်တော်တို့ဟာနာမည်ကြီးသိအဖြစ်ပြန်ကြားရေး Analytics မှဒိုမိန်းတစ်ခုဝန်ဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ် SaaS အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ဆော့ဝဲမှာကျော်လွန်မျှော်လင့်ချက်များအပေါ်စောင့်ရှောက်။ လူတိုင်းဟာသို့ချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Big Data သူတို့သည်တက်ပေါ်တွင်အလုပ်အတွက်အဖွင့်တဲ့တစ်တန်ရှိသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပေါ်အခြေချရန်အဘယ်အရာသည်နှင့်အရာဒေတာများကိုသိပ္ပံအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်နားမလည်အခြေခံဖြစ်ပါသည်ဒေတာများကိုသိပ္ပံသို့ရှေ့ဆက်နင်းအောင်။ ဤအရာအရပျဖြစ်ပါသည် R ကို, Python ကိုနှင့် Hadoop ကြွလာတော်မူဒီမှာကသူတို့ကိုသိရန်တစ်ဆယ်အကြီးတွန်းအားဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Google ကအမေရိက၏ဘဏ်နှင့် The New York Times ကိုနဲ့တူစည်းချက်အမည်များကိုထည့်သွင်းထားတဲ့, သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ချိုးဖျက်ဖို့သင်ယူသင့်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ programming နေကြသည်။
Accessibility:ဘယ်လိုအခြား client ကိုသူတို့ကိုသင်ယူဖို့မျှော်လင့်ထားသလဲ? R ကိုဥပမာ, မိတ်ဆက်ပြီး run ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ထိုင်နှင့် anyplace ကအကြောင်းရှာရန် Client အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ Python ကိုထို့နောက်တဖန်သင်ယူဖို့လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများသည်နှင့်အခြို့က programming ကိုတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ၏အရှိဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ဟုဆိုသည်။ Hadoopဒါကြောင့်မစိုက်လက်လှမ်းစေသည်ရာ, တစ်ချိန်ကပိုပြီးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်စနစ်များအပေါ်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်, client ကိုသူတို့အားမဆိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူသော
upgrades: အဖြစ်ဝေးသတင်းအချက်အလက်စာမေးပွဲသက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, ဤသုံးပါးက open-source ပရိုဂရမ်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုအများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ပြန်ကြားရေးတင်သွင်းကိုယ်စားပြုမှု, MapReduce နှင့်စင်ပြိုင်ထုတ်ယူခြင်းအကောင်းဆုံးနောက်တဖန်သူတို့ကိုအားဖြင့်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများကိုဖန်ဆင်းသောထည့်သွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဆင့်ဆင့်အစဉ်မပြတ်ဒီဇိုင်းရမည်ဖြစ်သည့်တစ်ဦး aftereffect သကဲ့သို့, သူတို့နှငျ့အတူပွညျ့စုံစေနိုင်သည်။
လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်း: အဆိုပါပရိုဂရမ်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအားလုံးမည်သည့် gadget ကအပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြည့်စွက်ရန် clients များခွင့်ပြု, Windows, Mac OS X ကို, Linux နဲ့အားလုံးပို၏စုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ဆင်တူအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်ကျော်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ R ကိုနဲ့ Python ဒီဇိုင်နာများသည်လက်ရှိတွင်ပိုကြီးသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရန်ချဉ်းကပ်စဉ်းစားနေကြသည်ပိုကြီးအဆင့်ကျော် crosswise အရွယ်အစားနှင့် SQL နှင့် NoSQL databases ကိုနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တာ။
ခန့်မှန်းရခက်ရိုးရှင်းသောဖန်ဆင်း: ဤသုံးပါး programming တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများသည်လည်း Big Data ကိုခေါ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအချက်အလက်များ၏စောင့်ရှောက်မှု, တာအသုံးပြုသွားမည်နေကြသည်။ လေးလံပြီးရှုပ်ထွေးအပန်းဖြေအထက်တန်းလွှာအုပ်စုများတွင်သို့မဟုတ်မြောက်မြားစွာပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူဤတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအသုံးချဖို့အားဖြင့်ဆွေမျိုးရိုးရှင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သင့်သည်။ Python ကိုမည်သို့ပင်နှစ်ဦးစလုံးကိုဆှေးနှေးကောင်းစွာနှင့်အတူဘာမှ R ကိုထက်သာလွန်သတင်းအချက်အလက် peruses Hadoop, ထို client များနှင့်အတူ run ဖို့ရာတစျခုကောက်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါ် မူတည်. ၏ရွေးချယ်မှုပေးခြင်း။
Awesome ကို Accept: အားသာချက်များ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအရေအတွက်သည်နှင့်တကွ, တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဘုတ်အဖွဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုဖြတ်ပြီးတိုးလာကြပါပြီနှင့်သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံစီမံခန့်ခွဲနေစဉ်အတွင်းတစ်ဝှမ်း2သန်း clients များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကသူတို့ကိုအသုံးချ။ R ကို Oracle က, SAP, Netezza နှင့် Teredata အတူဘုတ်အဖွဲ့ထိုက်တန်ကိုဖြတ်ပြီးတိုးမြှင့်ထားပြီးယခု၏အဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုအဖြစ် R ကို utilizations ကြောင်း interfaces ကိုစတင်ပါပြီ။
တိုင်းတာတိုးတက်မှု: သူတို့သည်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ချက်နဲ့များမှာကတည်းက programming ကိုဒီဇိုင်းအသစ်မဆိုအသစ်သောတိုးတက်မှုများမှီခိုဤသုံးပါးတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများတပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ff နှင့် bigmemory တူသောအသစ်သောတိုးတက်မှုများနှင့်အတူကြောင့်မှတ်ဉာဏ်ထက်ပိုကြီးတဲ့အချက်အလက်စာရင်းများအတွက်စီမံခန့်ခွဲဖို့လက်ရှိစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ Python ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်နှင့်အတူထပ်တူသတင်းအချက်အလက်အများကြီး peruses Hadoop အထူးချသောဆုဖြစ်၏။
ထုတ်ဝေခြင်း၏ရိုးရှင်း: အဆိုပါပရိုဂရမ်မျိုးကွဲများကိုထိမ်းသိမ်းစံချိန် distribution နဲ့အတူကောင်းစွာထည့်သွင်းကတည်းကသူတို့ကဖြန့်ချိမယ့်ထိပ်တန်းရွေးဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ချောမွေ့မူဘောင်ဖြန့်ဖြူး LaTeX မှတ်တမ်းများနှင့်အတူစုပ်ယူမှုနှင့်စကားလုံးကိုင်တွယ်အစီရင်ခံစာများတွင်တပ်ဆင်ထားကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းအချက်အပြင်တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမျိုးကွဲများကိုထိမ်းသိမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုတဦးတည်းကရိုးရှင်းတဲ့အချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့် volumes ကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်အောင်အတော်လေးသိသိသာသာဇီဝစနစ်များရှိသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်: R ကို, Hadoop နဲ့ Python နားလည်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြပြီးအတားအဆီးမရှိဘဲအလုပ်မဆိုကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူမည်သည့် client ကိုခွင့်ပြု Microsoft က Excel, Access ကို, Mysql, SQLite နှင့် Oracle ကမှသတင်းအချက်အလက်များ၏တင်သွင်းအထောက်အပံ့ပေးတယ်။ Python ကို အောင်မြင်စွာသဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ပြီး Apache ကို Spark တှငျတှေ့သတင်းအချက်အလက်များဖန်ဆင်းတော်မူပြီ Hadoop ပွင့်လင်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာ bunches ။
ကျင်းပရေး: အဝန်းဆက်သွယ်မှုနှင့်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အားထက်သန် client များအစဉ်မပြတ်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးတသမတ်တည်းကုန်သွယ်မှုအာမခံသည်အခြားသမျှထက်ကဤအကွက်ထဲတွင်ရေးပါအကြောင်းပြောဆိုရန်အဆောက်အဦကျော် interfacing နေကြသည်။ အဆိုပါမကြာသေးမီက Anaconda ခွဲဝေချထားပေးရန် propelled အနာဂတ်အထုပ်အဘို့ထိုသူတို့အပေါ် egging, သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် clients များအနေဖြင့်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်စစ်တမ်းများကိုစုဝေးစေတော်မူကြောင်းကို 300 ထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအထုပ်ရှိပါတယ်။
ရိုးရှင်းသော Debugging: scanning နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအများဆုံး troubleshooting devices တွေကိုပိုပြီးမှတ်သားဖွယ်စာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူစံပြအမှုအရာတင်ထားရန် clients များခွင့်ပြုဤတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနှင့်အတူတသမတ်တည်းထားကြသည်ဟူသောအချက်ကို၏အလငျး၌အခြားသူများထက်ကဤအကွက်ထဲတွင်ရေးပါနှင့်အတူလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစကား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်မဟုတ်တဦးတည်းဟုပြောစေခြင်းငှါ, R, Python ကိုနှင့် Hadoop အစီအမံများမှာအဖြစ်လုံခြုံနှငျ့သငျတစျခုလုံးကိုမူဘောင်ဒီဇိုင်းအသစ်အဘို့အသွားဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးသင့်ရဲ့မူဘောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုမှုကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Beginners များအတွက် Python ကိုသင်တန်းလမ်းညွှန်
Big Data & Hadoop လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းအတူအလုပ်ရှာဖွေရေး Start လုပ်နည်း